Betsaka ny ezaka vita tao anatin’ny 32 taona: ho sitrana tanteraka ny sosona ozona, ny taona 2060 | NewsMada
Construction du Stade Barea : la deadline maintenue ...février 18, 2020
Rotaka tany Ambilobe: nirefotra ny lakrimozena, potiky ny tora-bato ny kaomisarian’ny polisy ...février 18, 2020
Démenti du système des Nations unies : Ny Rado R et son Icafe, inconnus du bataillon
Tsy nisy akory ilay hoe fanafihana mitam-piadiana: telo vavy mpiasan’ny Shop Airtel cité Itaosy naiditra am-ponja
Nirefodrefotra ny basy tao Toamasina: olona iray maty, polisy iray naratra mafy, dimy voasambotra
Plainte pour escroquerie : Cinq ans fermes pour Fleury Rakotomalala
Betsaka ny ezaka vita tao anatin’ny 32 taona: ho sitrana tanteraka ny sosona ozona, ny taona 2060
Par Taratra sur 17/09/2019
32 taona nanapahan-kevitra ny fikambanana iraisam-pirenena fa mila arovana ny sosona ozona fa tandindomin-doza ny tany noho ny fahasimbany ka miteraka fiakaran’ny hafanana sy ny fiovan’ny toetr’andro.
Nisy fifanarahana momba ny fiarovana ny sosona ozona natao tany Vienne sy tany Montréal, nodinihina teo anivon’ny Fandaharanaan’ny fikambanana iraisam-pirenena ho an’ny tontolo iaiana (PNUE). Natao sonia ny fifanarahana, ny taona 1985 sy ny taona 1987, ary nankatoa ny firenena eran’izao tontolo izao. Vokany, efa nihena 80% mahery ny fihenan’ny famokarana sy ny fanjifana akora manimba ny sosona ozona, araka ny fanazavana nentin’ny tomponandraiktiry ny “point focal” misahana ny sosona ozona, Rabemananjara Rivo, omaly teny Antsahavola. Miaro ny tany amin’ireo taratra mampido-doza avy amin’ny masoandro ny sosona ozona. Tao anatin’ny 32 taona, efa nihena ny trangana aretina homamiadana, ny fahajambana ary efa nitombo ny hery fiarovan’ny vatan’olombelona noho ny ezaka samihafa nataon’ny tsirairay iarovana ny sosona ozona.
Ho an’ny ilabolan-tany atsimo izay misy an’i Madagasikara, ny taona 2060 no ho sitrana tanteraka ny sosona ozone raha mitohy ny ezaka, 1 ka hatramin’ny 3% ny fahasitranana isaky ny 10 taona.
Nomarihina, omaly, ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny fiarovana ny sosona ozona ary lohahevitra ny hoe « 32 taona ary an-dalam-pahasitranana ».
Tokony hojerena hatrany ny entona amin’ny fitaovana
Ho an’ny eto Madagasikara, miara-miasa ny minisiteran’ny Tontolo iainana sy ny fadin-tseranana ary ny minisiteran’ny Varotra amin’ny fanaraha-maso ny fitaovana ahitana ny entona manimba ny sosona ozona (SAO). Tafiditra ao ny vata samihafa fampangatsiahana, ny “congélateur”, ny “climatiseur”, ny fanafody famonoana biby amin’ny fambolena…
Entanina, noho izany, ny mpanjifa ireny karazam-pitaovana ireny hijery tsara raha misy entona manimba ny sosona ozona na tsia ilay fitaovana fa voasoratra amin’ny fonony izany. Rehefa simba koa ilay fitaovana, tokony ho teknisianina manana fahaizana momba ny « froid » no alaina hanamboatra.
Australia Alumni Association of Madagascar #Photo 18/02/2020
Construction du Stade Barea : la deadline maintenue 18/02/2020
Rotaka tany Ambilobe: nirefotra ny lakrimozena, potiky ny tora-bato ny kaomisarian’ny polisy 18/02/2020
Songadina an-tsary 18/02/2020
Kitra – «Arabe cup U20»: resin’ny Barea de Madagascar i Djibouti 18/02/2020
Ankitsim-po: maika ny any ambanivohitra